Ama-Geminids: ayini, izici, nini futhi kanjani ukuwabona | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngomunye weMeteor Showers osebenza kakhulu futhi ofanele ukubonwa. Kumayelana nesithwathwa AmaGeminids. Yiqembu lezinkanyezi elibonakala livela endaweni ethile kumlaza weGemini, yingakho igama lalo, futhi liyabonakala kusukela ekuqaleni kuya maphakathi noDisemba. Inenani eliphakeme elenzeka cishe ngomhla we-14 kuleyo nyanga unyaka ngamunye futhi yisikhathi lapho ungabona khona ama-meteor ayikhulu noma ngaphezulu ngehora.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi ngamaGeminids, izici zawo nokuthi uwabona kanjani.
2 Umsuka wamaGeminid
3 Incazelo yamaGeminid
4 Uwagcina nini futhi kanjani
Uma nje izimo zezulu zizinhle, zibonakala ngokwanele futhi kungubusuku obungenanyanga, ziyabonakala ama-meteor angaphezu kwekhulu ngehora ngesikhathi sobusuku bamaGeminids. Lokhu kuyenza ukuthi ibe yi-meteor shawa esebenzayo kunazo zonke engabonakala namuhla. Le ulwelwe lusezingeni elifanayo nama-quadrantid avela ngenyanga kaJanuwari.
Ngaphezu kwemisebe enamandla, amandla adonsela phansi akhishwa yilanga nawo angadabula izingqimba ezingaphandle zezinkanyezi ezinomsila noma ama-asteroid. Izinsalela zihlala emzileni wazo futhi zihamba ngesivinini esisheshayo, futhi lapho uMhlaba usondela ngokwanele, zingena emkhathini. Ukungqubuzana okubangelwe ukuthintana namagesi asemkhathini kuyaziveza, kubonakale njengokukhanya kokukhanya endaweni ephakeme kakhulu, futhi ukushisa kuqedela ngokuphelele isibhakabhaka.
Izingcezu azivamile ukuwela phansi. Esimweni esinjalo, abizwa ngokuthi ama- meteorite, futhi lapho esesendleleni, abizwa ngokuthi ama- meteoroid. Ngale ndlela, imfucumfucu iyahlukaniswa, kuya ngokuthi ngabe ingaphandle komkhathi noma ingaphakathi komkhathi, noma igcina iwele phansi.
AmaGeminids ayiqembu lezimvula eziwa emkhathini ezingejwayelekile ngemvelaphi yazo okungeyona inkanyezi enomsila, kodwa i-asteroid. I-asteroid yaziwa ngegama likaPhaeton futhi yatholakala ngo-1983, cishe yonke imvula yezinkanyezi ezinomsila yakhiwa yizinkanyezi ezinomsila futhi, ngakho-ke, amaGeminids yiwona ahlukile.
Izazi zezinkanyezi azivumelani nemvelo yale nto ngoba kubonakala inezici ezihlanganisiwe ze-asteroid-comet, yize ukubonwa kungazange kuveze ikhoma elijwayelekile le-Phaeton lezinkanyezi ezinomsila. Umehluko ojwayelekile phakathi kwendikimba ethile yasezulwini nomunye wukuthi izinkanyezi ezinomsila zivame ukwenziwa ngeqhwa, kuyilapho ama-asteroid kufanele abe ngamatshe.
Kukhona umbono wokuthi i-Phaeton yayiyinkanyezi enomsila eminyakeni engu-2000 eyedlule, kodwa lapho yayiseduze kakhulu nelanga, amandla ayo adala inhlekelele enkulu, umzila wendlela washintsha kakhulu, washiya inqwaba yemfucumfucu, namuhla esiyibiza ngokuthi amaGeminids.
Kubukeka sengathi izihlambi zemvula zeGemini azange zivele masinyane ngemuva kwalesi sehlakalo, ngoba irekhodi lokuqala lokubonakala kwazo lisukela emuva ku-1862. Ngakolunye uhlangothi, eminye imvula ye-meteor, njenge Ama-Perseids kanye namaLeonid uqobo, abekhona amakhulu eminyaka.
Iqiniso ukuthi noma ngabe ishawa lesibhakabhaka lihlobene nemfucumfucu eshiywe ngama-asteroid kanye nezinkanyezi ezinomsila, akwenzeki njalo ukubona imfucumfucu eshiywa yindlela yokugcina unyaka nonyaka.
Imfucumfucu ekhiqize i-meteorite yalo nyaka kungenzeka ukuthi yadalwa kudala futhi yahlala isendleleni kusukela lapho. Kepha kufanele sicabange ukuthi imijikelezo ayimile, iyashintsha ngenxa yokuhlangana kwamandla adonsela phansi nezinye izinto.
Ama-Geminids aqanjwa kanjalo ngoba abonakala evela endaweni ethile kumlaza weGemini obizwa ngokuthi okhazimulayo. Lokhu kungumphumela wokubuka nje, ngoba izindlela ziyafana futhi zibonakala zihlangana ebangeni, njengamathrekhi esitimela. Kepha ihlinzeka ngendlela yokuqamba amagama kuzo zonke izihlambi ezinkulu zemeteor, ngakho-ke le meteor mesha iqanjwe ngegama lomlaza lapho kukhona khona indawo ekhazimulayo.
Ishawa siqala ukubonakala cishe ngoDisemba 4 futhi siqhubeke kuze kube ngumhla ka-17, ngenani eliphakeme lomsebenzi osondele ngomhla ka-13 noma 14. Ukubonakala, kufaka phakathi isibhakabhaka esingenamafu nesingenanyanga.
Izinga le-zenith le-Geminid meteor shower lingelinye eliphakeme kakhulu: Ama-meteor ayi-100-120 ngehora, okukhombisa ukuthi izingcezu ezashiywa yiPhaeton azikahlakazeki kakhulu kuze kube manje. Ngaphezu kwalokho, ukubonwa kukhombisa ukuthi izinga le-zenith lenyuke kancane selokhu imvula yatholakala.
Inkomba yabantu ilinganisa ukukhanya kwemizila eshiywe yiqoqo lezemeteor, kanti ishawa leGemini meteor liphuzi. Kuya ngezinto ezifana nobukhulu nesivinini se-meteor, futhi imelwe ngu-r.
Inani laso cishe lihlale lisethelwe ku-2, kepha kumodeli yezibalo eguqulwe ekuziphatheni kweGemini, inani liyi- r = 2.4, okuyi-2.6 ngesikhathi esiphezulu somsebenzi. Ngokwalo, umbala ophuzi ukhombisa ubukhona bensimbi ne-sodium ekwakhiweni kwezingcezwana.
Uwagcina nini futhi kanjani
Ukuze sibheke amaGeminid singaya noma yikuphi emhlabeni. Zingabonakala kuwo womabili ama-hemispheres, yize zingabonakala ngokusobala kakhulu kusuka enyakatho Nenkabazwe. Ukukhazimula kuqala ukubonakala ntambama, ngenkathi eningizimu yezwe kufanele ulinde phakathi kwamabili. Njenganoma isiphi ishawa sezinkanyezi, izinga le-meteor ngehora liyakhula njengoba isikhathi sihamba futhi okukhazimulayo kuphakeme kunesibhakabhaka. Izikhathi ezinhle kakhulu zokubona ukugeza kwe-meteor okuhambelana namaGeminids kusentathakusa kuze kuphume ilanga.
Emini imvula izoqhubeka, kepha kunzima kakhulu ukukuqonda ngoba ijubane lezingcezu alisheshi kakhulu uma liqhathaniswa neminye imvula ye-meteor. Ukubukwa okuhle kakhulu Zenziwa ngokukhetha indawo ekude nokungcola kokukhanya kwedolobha futhi ngithemba ngelinye ilanga ukuthi ayikho inyanga esibhakabhakeni nokuthi sisezingeni eliphakeme. Ama-meteor azobonakala emaningi ngokuhamba kobusuku.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngamaGeminids nezici zawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » AmaGeminids
Isimo sezulu saseSpain